ओलीको मिसन सफल, अब प्रचण्डको कुनै आबस्यक नपर्ने र नेकपाको अस्तितो समप्त हुदै – Krazy NepaL
November 3, 2020 631
ओलीको मिसन माओवादी समाप्त पार्ने थियो, त्यो पूरा भयो, अब प्रचण्ड चाहिएन !
काठमाडौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अब कुनै चमत्कार नभए पार्टी फुट्ने निश्चत देखिएको चर्चा हुन थालेको छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरुले नै पार्टी फुटको संघारमा रहेको भन्न थालेका छन् । पार्टी अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरुले एक अर्कालाई दोषी देखाएर पार्टी फुटबाट जोगाउन आह्वान गरिरहेका छन् । तर आ–आफ्नो गल्ती भने कसैले स्वीकार गरेका छैनन् । एकता जोगाउन सार्वजनिक आह्वान गरे पनि भित्रभित्रै पार्टी फुटपछिको रणनीतिबारे पनि तयारी गरिरहेका छन् ।
पार्टीको पछिल्लो विवाद हेर्दा नेकपाको एकताको आधार समाप्त नै भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल । उनले भने, ‘पार्टी जेका लागि गठन भएको थियो त्यसको आधार नै समाप्त भएको छ, त्यसैले यो पार्टी अब एक रहन्न ।’ उनका अनुसार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएर मात्र नेकपा बनेको हो । विश्लेषक खनाल भन्छन्, ‘दुई अध्यक्षको बीचमा दुईजना अध्यक्ष र दुवैजना प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । यदि संविधानले दुईटा प्रधानमन्त्रीको प्रावधान राखेको भए, दुवैजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर प्रावधान नभएको कारणले आधा आधा समय प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गर्नुभएको थियो ।अहिले त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएपछि लफडा शुरु भएको हो । त्यसैले जुन आधारमा एकता भएको थियो, त्यो आधार नै समाप्त भएपछि अब एकीकरणकरणको औचित्य समाप्त भएको हो ।‘
४० प्रतिशत जसले पुर्याउँछ त्यसले पार्टी फोड्ने र पार्टी फोरेपछि सरकारको कुरा पनि आउने उनी बताउँछन् । ‘पार्टी फुटेपछि काँग्रेस र जसपाले जसलाई साथ दिन्छ, त्यसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ,’ भित्रभित्रै त्यो खेलमा पनि नेताहरु लागि सकेको उनले बताए ।
Prevके यस्तो राज थियो जुन जुत्ता नै चार करोड ८३ लाख ८० हजार रुपैयाँमा बिक्री भयो ?
Nextके तपाईलाई चार बेदको बारेमा थाहा छ ? चार वेदको सम्क्षिप्त परिचय